The Voice Myanmar က ဒိုင်တွေထဲကဘယ်သူ့ကို အနှစ်သက်ဆုံးလဲ?
သင်ဟာ The Voice Myanmar သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ ကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတစ်ဦးလား?
5 Mar 2018 . 5:49 PM
သင်ဟာ Voice သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ ကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတစ်ဦးလား?
စနေနဲ့တနင်္ဂနွေ နေ့ တို့မှာ Mrtv4 ကနေ လာတဲ့ The Voice Myanmar သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ ကို စိတ်ပါဝင်စားသူတွေ တစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ် ပို၍များပြားလို့လာပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကို စပြသခဲ့တာ ဆိုရင်တော့ သုံးပတ်ဆက်တိုက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒိုင်တွေ ဖြစ်တဲ့ လင်းလင်း ၊ ကျားပေါက် ၊ နီနီခင်ဇော် နဲ့ ရန်ရန်ချမ်း တို့ကနေပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြသူတွေ ထဲကမှ သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူတွေ ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လို့ သင်ကြားပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒိုင်တွေရဲ့စကားလုံးတွေ ကြောင့် ကြည့်ရှု့သူ ပရိသတ်တွေဟာ တစ်ပတ်ထက်တစ်ပတ်ပိုစိတ်ဝင်စားမှုကို ပိုစေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လင်းလင်း နဲ့ ကျားပေါက်တို့ အပြိုင်အဆိုင် ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်ကို လုနေတဲ့ အချိန်ဆိုရင် သူတို့တစ်ဦးကိုတစ်ဦး စနောက်တဲ့ ပုံ တွေကလည်း ကြည့်ရှု့သူတွေ အတွက် ပျော်ရွှင်စရာ ရသ ကို ခံစားမိစေပါတယ်။ ဒိုင်တွေ က စကားကြွယ်သလို ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေ ဟာ လည်း ကောင်းမွန်တဲ့ အတွက် Voice သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ ကိုတော့ သင်တာ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ တွေ ကို ကြည့်ရတာ ကြိုက်နှစ်သက်သူတစ်ဦး ဆိုရင် မဖြစ်မနေစောင့်မျှော်ကြည့်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Free to Air Channel တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MRTV4ကနေ အပတ်စဉ် ည ၉ နာ၇ီမှ ၁၀ နာ၇ီခွဲ အထိ စနေနဲ့တနင်္ဂနွေ တို့မှာ ကြည့်ရှု့နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေ အပေါ်သင့်ရဲ့ အမြင်ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း ပြောပြခဲ့ဦးနော်…..
သငျဟာ Voice သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲ ကို ကွိုကျနှဈသကျသူတဈဦးလား?
စနနေဲ့တနငျးင်ျဂနှေ နေ့ တို့မှာ Mrtv4 ကနေ လာတဲ့ The Voice Myanmar သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲ ကို စိတျပါဝငျစားသူတှေ တဈပတျနဲ့တဈပတျ ပို၍မြားပွားလို့လာပါတယျ။ ဒီအစီအစဉျကို စပွသခဲ့တာ ဆိုရငျတော့ သုံးပတျဆကျတိုကျရှိနပွေီ ဖွဈပါတယျ။ ဒိုငျတှေ ဖွဈတဲ့ လငျးလငျး ၊ ကြားပေါကျ ၊ နီနီခငျဇျော နဲ့ ရနျရနျခမျြး တို့ကနပေါဝငျယှဉျပွိုငျကွသူတှေ ထဲကမှ သူတို့ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ သူတှေ ကိုကိုယျတိုငျရှေးခယျြလို့ သငျကွားပွသပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ဒိုငျတှရေဲ့စကားလုံးတှေ ကွောငျ့ ကွညျ့ရှု့သူ ပရိသတျတှဟော တဈပတျထကျတဈပတျပိုစိတျဝငျစားမှုကို ပိုစခေဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။ လငျးလငျး နဲ့ ကြားပေါကျတို့ အပွိုငျအဆိုငျ ပွိုငျပှဲဝငျတဈယောကျကို လုနတေဲ့ အခြိနျဆိုရငျ သူတို့တဈဦးကိုတဈဦး စနောကျတဲ့ ပုံ တှကေလညျး ကွညျ့ရှု့သူတှေ အတှကျ ပြျောရှငျစရာ ရသ ကို ခံစားမိစပေါတယျ။ ဒိုငျတှေ က စကားကွှယျသလို ပွိုငျပှဲဝငျတှရေဲ့ ယှဉျပွိုငျမှုတှေ ဟာ လညျး ကောငျးမှနျတဲ့ အတှကျ Voice သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲ ကိုတော့ သငျတာ သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲ တှေ ကို ကွညျ့ရတာ ကွိုကျနှဈသကျသူတဈဦး ဆိုရငျ မဖွဈမနစေောငျ့မြှျောကွညျ့သငျ့တယျလို့ထငျပါတယျ။
Free to Air Channel တဈခုဖွဈတဲ့ MRTV4ကနေ အပတျစဉျ ည ၉ နာရီမှ ၁၀ နာရီခှဲ အထိ စနနေဲ့တနငျးင်ျဂနှေ တို့မှာ ကွညျ့ရှု့နိုငျမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲတှေ အပျေါသငျ့ရဲ့ အမွငျဘယျလိုရှိတယျဆိုတာကိုလညျး ပွောပွခဲ့ဦးနျော…..